Sawirada xaday ee Huawei Nova 4: kani wuxuu noqon doonaa taleefanka | Androidsis
Una daadinta dhawaanta shaaca ka qaaday dhammaan qeexitaannada soo socda ee Huawei Nova 4, dhammaadka soo socda ee shirkadda ee si rasmi ah loogu dhawaaqi doono Diseembar 17.
Hadda, dhowr sawir oo Nova 4 ah ayaa soo ifbaxay. Marka loo eego kuwan, moobiilku wuxuu bixin doonaa shaashad ballaadhan oo ballaadhan, maaddaama ay yeelanayso shaashad iyada oo aan lahayn qashin yar oo wareeg ah oo loogu talagalay kamaradda sawir-qaadashada, sida la filayo. Intaa waxaa dheer, xog kale waa la caddeeyay. Waan kuu balaarinay!
Taleefanka ayaa laga heli karaa afar ikhtiyaar oo midab leh: Fritillaria Caddaan, Suyin Buluug, Malab Casaan iyo Madow dhalaalaya. Noocyada cusub ee xaday ee Huawei Nova 4 ayaa soo baxay si loo xaqiijiyo kala duwanaanta midabka iyo muujinta naqshadeeda hore iyo gadaal.
Huawei Nova 4 daadinta saxaafadda ayaa muujineysa taas Moodooyinka Fritillaria White, Suyin Blue iyo Honey Red waa daabacado midab leh. Caddaanku wuxuu umuuqdaa isku dar buluug, casaan, iyo jaalle ah. Kala duwanaanta buluugga ah waxay u egtahay midabbo dusha sare iyo buluug xagga hoose ah. Nooca Honey Red waa isku dar casaan iyo guduud ah. Daabacaadda Madoow ee Madoow ayaa gabi ahaanba mugdi ah.
Muraayadda gadaal ee Huawei Nova 4 waxay leedahay qori akhristaha faraha iyo a toos u diyaarinaya duubista kamarad saddex-laab ah. Qoraallada "48MP AI Camera" iyo "Huawei" ayaa sidoo kale lagu xardhay qaybta dambe ee taleefanka. Wejiga hore ee midkaan waxaa inta badan qaata shaashadda duleelka kamaradda shaashadda, taas oo leh hareeraheeda caato ah, oo aan jirin. Hoos waxaa ku yaal xayeysiin rasmi ah oo rasmi ah oo loogu talagalay taleefanka.
Nooca dheer ee Huawei Nova 4 wuxuu ku imaan doonaa nidaam kamarado ah oo saddex-geesood ah oo gaaraya 48-megapixel + 16-megapixel + 2-megapixel, halka qaabka caadiga ah lagu qalabeyn doono 20-megapixel + 16-megapixel + 2-megapixel saddex jeer ah. . Tilmaamaha soo haray ayaa la filayaa inay isku mid ka noqdaan labada nooc. Nova 4 waxaa ku shaqeyn doona Kirin 970 chipset, 8 GB oo RAM ah iyo batari 3,750 mAh ah oo leh 18-watt oo taageero degdeg ah ka qaata. Waxay yeelan doontaa keyd 128GB ah oo lagu dhejiyo iyo booska kaarka microSD ee boos badan.
Marka la eego, qalabku wuxuu qalabeyn doonaa shaashadda 19.25: 9 FHD +. Kani wuxuu joogi doonaa kamarad dhan 25 megapixel. Casriga ah ayaa lagu soo oogi doonaa Android 9 Pie, halka qiimaheeda aan wali la shaacin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Kani wuxuu noqon doonaa Huawei Nova 4: daloolka shaashadda, xoogaa jibbaarro ah iyo wax badan oo ku saabsan soo socda-sare